Hangi buqqee mataa dandeettii waa yaaduurratti dhiibbaa qabaa?
Hangi buqqee mataa dandeettii waa yaaduurratti dhiibbaa qabaa? Featured
Yeroo baay’ee barsiifataan namootni keenya nama buqqee mataa guddaa qabu dandeettiin waa yaaduusaa olaanaadha jedhanii amanu. Yaadni namootaa kun ija saayinsiitiin yommuu ilaalamu garuu dandeettii waa yaaduufi hanga guddina buqqee mataa gidduu hariiroon akka hinjirre hubanna.
Kunis kan mirkanaa’e qorannoo yeroo dheeraa bineensotarratti taasifameeni. Dandeettiin waa yaaduu dhala namaa qofaaf jedhamaa haa turu malee bineesonni akka gooriillaa, chimpaazii, qamaleefi jaldeessaafaa bilchina waa yaaduun dhala namaatti hiiqu qabu.
Qorannoon dhiyeenya kana saayiintistoonni Jarmaniifi Ingilizii taasisan waan haaraa qabatee as ba’eera. Isaanis arraaggesa/quurruurratti qorannoo yeroo dheeraa taasisaniin dandeettiin waa yaaduusaa kan bineensota armaan olitti eeraman waliin walqixa ta’uu ifa taasisaniiru.
Kunis quurruun uumamaan buqqee mataa xiqqoo yoo qabaatellee, dandeettii yaaduun bineensota biroo isaan buqqee mataa guddaa qabaniin walqixa ta’uu mirkanaa'eera. Kanaaf, hangi guddina buqqee mataa dandeetti waa yaaduurratti dhiibbaa akka hinqabnedha kan hubatame.
Torban kana/This_Week 44057
Guyyaa mara/All_Days 1635852